Emechara Project 80 Kastamonu USB Car | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyBlack Sea Region37 Kastamonu80% nke Kastamonu Cable Car Project dechara
22 / 05 / 2020 37 Kastamonu, General, Gondola, Black Sea Region, Isi akụkọ, Turkey, TELPHER
% oru komamonu USB ugboala emechara
Kastamonu Mayor Mayor Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, na-aza ajụjụ nke mgbasa ozi TV nke Istanmonu na Gönül Geography, zara ajụjụ nke İstamonu Editor na Chief Hüseyin Karadeniz, Vidinlioğlu kwuru na Cable Car project bụ dagger nke dị n'akụkụ abụọ nke Kastamonu.
N'ikwu na ya na-eche na ọrụ ụgbọ ala USB adịghị mma, Mayor Vidinlioğlu kwuru, “Ọ bụrụ n'ụgbọ ala USB dị n'oge m, agaghị m agakwuru T nke ụgbọ ala USB. Mana anyị hụrụ ya n'ụgbọala USB. Ahuru m ugbo ala nke eriri ka eji mma agha nogide na akuku Kastamonu. Ọ bụrụ na ịnwere ike iburu ụgbọ ala ọdụ ụgbọ elu dị na Turkey Ilgaz oge ​​ọ na-etinye ụmụ amaala anyị site na ebe ọ bụla ọ ga-aba uru. Enweghị isi na ịbata site na ụlọ elu ụlọ elu. Come batara n’etiti nkeji iri na ise. Anya nnụnụ na-ele anya, ị na-elele ụlọ ụlọ elu, ị naghị ahụ obodo n'ime, ọ dị mma. Ya mere, ụgbọ ala USB abaghị uru ọ bụla na oge ya adịghị mma maka ụdị ederede. Ma, ihe dị ka ihe dị ka pasent iri asatọ ezuola, ma anyị niile chọtara ọrụ ejiri eriri na ụdọ. Nke a nwekwara ụgwọ ọrụ. Ọ baghị uru ịbanye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke a, na-enwe ọrụ zuru ezu na pasent 2 zuru ezu. Akụkụ abụọ nke obodo ahụ ga-ezukọ. Ga-esi n’ime ụlọ elu a pụta, ị ga-esikwa n’ulo ụlọ elu gaa n’ụlọ elu. On nkezi, ego a kwụrụ ugbua gbara 15 na ọkara, nke KUZKA burula puku puku abụọ. Ihe dị ka nde kwụrụ 80 site n'aka ndị obodo. Onwere ọnụ ọgụgụ karịrị nke anyị kwesịrị ịkwụghachi. ”
99 nke ụgbọ okporo ígwè Kars Baku rụchara!
Akara 35 nke Epuzia Tunnel Project (Photo Gallery)
50 nke Samsun Logistics Center kwusiri
Ejirila 45 pasent nke Ilifz Tunnel
Na 80 nke Honda Tunnel
Kastamonu Obodo Cable Car Project Monuments High Council
Kastamonu Municipality Teleferic Project Akwa Council of Monuments ına
Astlọ ebe obibi Kastamonu na Clock Tower Cable Car Project Construction Yap Constructionm
Nkwado nkwado ego kwadoro maka ọrụ ụgbọ ala Kastamonu
Kastamonu Cable Car Project abanye
Ngwongwo ugbo ala Kastamonu natara nkwenye akwukwo
Kastamonu Castle Ropeway Project nro
Castle Kastamonu na ulo elekere n'etiti Cable Car project project…
Kastamonu Castle-Clock Tower Cable Na-arụ ọrụ ụgbọ ala
Kastamonu Teleferic Project na-agbanwe ebe
Kastamonu cable car project on agenda again